Todobo sano iyo xukumadda Kulmiye iyo sifaha ugu mihiimsan ee lagu xasuusan doono | Somaliland Tomorrow
Todobo sano iyo xukumadda Kulmiye iyo sifaha ugu mihiimsan ee lagu xasuusan doono
7 SANO IYO XUKUUMADA KULMIYE IYO SIFAHA UGU MUHIIMSAN EE LAGU XASUUSAN DOONO.
Waxaa maalintii Khamiista ee 27/07/2017 ku buuxday Todoba guuradii kasoo wareegtay markii Xisbiga Kulmiye la wareegay xukunka dalka iyadoo muddo xileedkii loo doortayna kaga eekaa Bishii todobaad ee sannadkii 2015. Hase yeeshee Xukuumada Kulmiye ayaa ku guuldaraystay inay doorashooyinka ku qabato wakhtigoodii waxaase hadda lagu rajowayn yahay inay doorashada Madaxtooyadu qabsoonto Bisha November ee sannadkan oo 3 bilood keliyi inaga xigto.
Inkastoo cidda ku guulaysan doonta doorashadaas la ogaan doono uun marka codadka la isu tiriyo, haddana waxaa saadaasha iyo ifafaalaha muuqdaa muujinayaan in rajada Xisbiga Kulmiye tahay mid aad u liidata islamarkaasna ay muuqato inuu lumiyay kalsoonidii 7 sanno ka hor shacabka reer Somaliland ugu codeeyeen iyo rajadii ay ka qabeen inuu noloshooda wax ka bedelo, horumarna u soo kordhiyo.
Haddaba sababta uu Xisbiga Kulmiye kalsoonidii shacabka u lumiyay ayaa arrimo badan loo sibir saari karaa kuwaasoo haddii mid mid loo dul istaago u baahan wakhti iyo faalo dheer, halalse kooban aan ka tilmaamo:
i) Qabyaalada oo si qaawan masuuliyiinta Xukuumada Kulmiye u adeegsadeen.
ii) Eexda iyo soo kala dhawaysiga ama kala fadilida muwaadiniinta.
iii) Caddaalad darrada oo sii baahday
iv) Masuqmaasuq baahsan
v) La’aanta qorshe dhaqaale
vi) Jebinta Xeerarka iyo Dastuurka dalka.
vii) Cashuurta oo aad loo kordhiyay
viii) Horumar la’aanta adeega Bulshada, khaasatan wax ka qabasho la’aanta baahiyaha aasaasiga ah iwm.
Waxaasoo dhan waxaase isku fuuqsanaya oo ay ku aroorayaan hal shay oo Xukuumada Kulmiye shaki la’aan ku sifoowday oo ah:
1) Daacad darro ama haddaan si kale u dhigo “hadal iyo ficil aan is qaban oo maalin kasta ummada lala soo horjoogsado”.
Hadal iyo ficil ama hab-dhaqanka aan is qabani wuxuu ka mid yahay arrimaha Allah SWT Adoomihiisa uga digay, tilmaamayna inay ciqaabta ay leedahay aad u adag tahay. Waxaa Kitaabka Eebe iyo Sunnihiisaba ku cad in Allah neceb yahay Beenta iyo Beenaalaha waxaase ka sii derojo liita kuwa ummada u sawira ee sumcad kaga samaysta wax aanay ahayn.
Ummadaha Islaamnimada ku abtirsada wax badan ayuu Allah SWT ugu bayaamiyay Diintiisa Furqaan laakiin ay muuqataa in aad loo baalmarsan yahay.
Halka ummadaha kale ee aan Islaamka ahayn, Allah SWT iyo Nebi Maxammed NNKH aan rumaysnayn, ay ku qaadato Baadhitaano iyo Tijaabooyin ay nolosha ku sameeyaan muddo dheer inay wax xaqiiqda Allah inoo bayaamiyay u dhaw fahmaan.
Tusaale ahaan haddii aynu is dultaagno Baadhitaanada Culimada Cilmiga Bulshada ku takhasusay, khaasatan Cilmi Nafsiga (psychology), gaar ahaan qaybta (moral psychology) ay ka sameeyeen qodobkan ayaa tilmaan cad iyana ka bixinaysa sida Bani Aadamku u neceb yihiin kuwa iska dhiga ama ku wacdiya dadka waxaanay ahayn oo Afka Ingiriisiga loogu yeedho (hypocrites) ama sida aan kor ku sheegnay kuwa aan qawlkooda iyo falkoodu is lahayn.
Cilmi Baadhayaal ka tirsan Jaamacada Yale University ee dalka Maraykanka ayaa dhawaan Cilmi Baadhis ay soo bandhigeen waxay ku yidhaahdeen ama ogaadeen.
“Waxaynu kasoo horjeednaa ama neceb nahay dadka aan qawlkooda iyo falkoodu islahayn (hypocrites) waayo waa kuwo dafirsan hab-dhaqankooda khaldan, ummadana isu tusa inay yihiin kuwo leh Qiyam sarreeya (high moral standards) laakiin xaqiiqdu tahay inay yihiin kuwo iyagu ku dhaqma waxay dhaliilayaan, moral criticism “.
Waxaa kaloo Cilmi Baadhistaas kasoo baxday in kuwaas dadku u arkaan inay xataa ka liitaan kuwa lagu yaqaano Beenta cad sheegisteeda iyo ku dhaqankeedaba.
Waxaa kaloo ka heer sareeya kuwa iska qirta inay waxay dhaliilayaan mararka qaarkood iyagu ku dhaqmaan waloow Qiyam ahaan ay uga soo horjeedaan.
Waxaan ku soo gunaanadayaa qoraalkan bal muwaadin dib u tixraac ololihii Xisbiga Kulmiye wakhtiyadii uu mucaaridka ahaa dhaliilihii uu soo jeedin jiray Xukuumadii ka horaysay iyo wixii ay odhan jireen waanu toosinaynaaba.
7 sanno ka dib, ma cid ayaa madmadow kaga jiraa in Xisbiga Kulmiye:-
▪️ku guuldaraystay ka midho dhalinta Himilooyinkii uu ummada u astayn jiray wakhtigii uu mucaaridka ahaa.
▪️Ku dhaqaaqay talaabooyin ka xun kuwii uu ku dhaliili jiray Xukuumadii ka horaysay, dhan walba ood eegtaba.
Waxay ummadu ku nacday Kulmiye oo aad moodaa in min Bari ilaa Galbeed ilaa Qurbaha dareenkoodu ka siman yahay fahamka iyo qiimaynta Kulmiye.
“Hadal iyo ficil aan islahayn, misrepresentation of moral character or hypocrisy”.
Waxaan Kulmiye ku xasuustaa wakhtigii uu mucaaridka ahaa nin Sheekh ah oo daliishan jiray Aayadaha Samawiga ah ee Allah SWT iyo Axaadista Nebiga NNKH markuu wax dhaliilayo hase ahaatee markii uu masuuliyadii ummadu gacanta u gashay siduu doonaba ka yeelay oo dhan walba u dhexqaaday, ma Qabyaaladbaa, ma Musuqmaasuqbaa, ma Kibriyaabaa, ma Eex iyo Qaraabo kiil baa, min ciyaadi Billaah.
Waa dhitada iyo dhaxalka Xisbiga Kulmiye u yaala.
Mohammed Aw Yuusuf